Mogadishu Journal » Wasaaradda Amniga oo digniin u dirtay Ganacsatadda Muqdisho
Wasaaradda Amniga oo digniin u dirtay Ganacsatadda Muqdisho
Mjournal :-Afhayeenka Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo warbaahinta kula Magaalada Muqdisho ayaa digniin culus u diray Ganacsatadda Soomaaliyeed oo uu sheegay in qaarkood ay lacag siiyaan Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in Ganacsatadda garoomada Muqdisho aysan xirikarin, islamarkaana cidii qaadata Amarka Al-Shabaab in laga qaadi doono tilabaabo.
Afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in ay gacanta ku hayaan Liiska Ganacsatado Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay lacag siiyaan Al-Shabaab.
Waxaa uu xusay in garoomadda Muqdisho oo dhawaan ay xireen Al-Shabaab in uu ku baaqayo in la furo, maadaama Al-Shabaab aysan ka talin Magaalada Muqdisho.
Digniintaan kasoo baxday Wasaaradda Amniga ayaa kusoo beegmaysa xilli Al-Shabaab ay xireen inta badan Garoomadda Salaxa ee lagu ciyaaro ee ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Kalluumaysiga oo ka hadlay shirka qaybsiga kheyraadka
Ciidamada Jubbaland oo weeraray Saldhig Shabaab ay ku sugnaayeen
Madaxweynaha Jubaland oo Caawa Kulamo ka wada Muqdisho by Ahmed Cali - Mon Mar 25th 19:19:56
SAWIRO:-Madaxweynaha Soomaaliland oo Hargeysa ku qaabilay Dr. Halit Eren by Ahmed Cali - Mon Mar 25th 14:01:40
Faah faahin imaashaha Axmed Madoobe ee Muqdisho by Ahmed Cali - Mon Mar 25th 13:59:27